Kenya Oo Sheegtay Inay QM Iyo Midowga Afrika U Gudbiyeen Dacwad Ka Dhan Ah Somalia - Latest News Updates
Kenya Oo Sheegtay Inay QM Iyo Midowga Afrika U Gudbiyeen Dacwad Ka Dhan Ah Somalia
Haweeneyda Wasiirka Arrimaha Dibedda ka ah dalka Kenya, Moniko Juma ayaa sheegtay inay Golaha Ammaanka ee QM iyo kan Midowga Afrika u gudbiyeen Muranka dhinaca Xuduud-badeedka ee u dhexeeya Kenya iyo Somalia.
Waxay kaloo sheegtay inay Danjirayaasha dalalka xubnaha ka ah Golaha Ammaanka ee QM iyo Gobalka Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika u gudbiyeen khariidada xuduud-baddeedka ee ay labada waddan ku murunsan yihiin.
“Waxaan warbixin kooban ka siinay xaalladda u dhexeysa Kenya iyo Somalia, si ay faragelin ugu soo sameeyeaan xiisadda ka dhex taagan labada Waddan” ayey tiri Haweeneyda Wasiirka Arrimaha Dibedda ka ah dalka Kenya, Moniko Juma.
Waxay kaloo sheegtay inay Kulanka ay Danjirayaasha u qabatay jimcihi la soo dhaafay ay ka mid yihiin Madaxa Ergadda Britain u joogta Kenya, Nik Hayley iyo Danjiraha Faransiiska u joogta Kenya, Aline Kuster Menager.
Dhinaca kale, Haweeneyda Wasiirka Arrimaha Dibedda ka ah dalka Kenya, Moniko Juma waxay shalay sheegtay inay Wasaaradeeda furtay Wada-xaajood si loo helo xal-saaxiibtinimo oo ku aadan muranka Xuduud-baddeedka ee dhawaan khilaaf Diplomaasiyadeed ka dhex dhaliyey Dowladaha Kenya iyo Somalia.
Waxayna carrabka ku dhufatay in murankaasi lagu xalin karo Wada-xaajood, waxayna rajo ka bixisay inay xal u heli doonaan murankaasi u dhexeeya Kenya iyo walaalaheenna albaabka nagu xiga.
“Waxaa na go’an in wada-xaajood lagu xaliyo murankaasi iyo inaan rajo buuxda ka qabno inaan xal u heli doono dhibaatadda u dhexeysa Annaga iyo Walaalaheenna albaabka nagu xiga, waayo danaheenna mustaqbalkeenna waa mid isku xiran” ayey tiri Monika Juma.
Mar sii horreysay, Xoghayaha Guud ee Maamulka ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Kenya, Ababu Namwamba waxa uu tilmaamay inaan marnaba wax wada-xaajood laga geli karin Xuuduudka Kenya.
Dowladda Kenya waxay bishan Feberaayo 16-dii u yeereen Danjirahooda ka joogay Somalia, waxayna soo cayriyeen Danjirihii Somalia u jooga Kenya.
Dhacdadaasi waxay Xuiisad Diplomaasiyadeed ka dhex abuurtay Labada Dowladood, iyadoo Kenya sheegtay inay Somalia xaraashayaan Xirmo ka mid ah Goobaha Shidaalka iyo Gaaska ee Xuduud-baddeedkooda, waa sida ay ku doodayaan.
Balse, DFS waxay si deggan u sheegtay in Khariidadii lagu soo bandhigay Shirkii Lonson uusan qeeyb ka ahayn Xirmooyinka Shidaalka ee ay Kenya ku doodayso Milkiyadooda.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladaha Somalia iyo Kenya waxaa ka dhexeeya Muranka Lahaanshaha xuduud-baddeed masaafadiisu dhan tahay 62,000 oo mayl oo saddex geesood isku wareeg ah, waxayna Dowladda Somalia Kiiska dacwadaasi ee dhul-boobka Kenya u gudbisay Maxkamadda Garsoorka Calaamiga ee ICJ oo ku taalla magaalladda Hayg ee dalka Holland sannadkii 2014-kii.